Transgenic बिरुवाहरु: तयारीको र प्रयोग
आनुवंशिक परिमार्जन बिरुवाहरु को मुद्दा थप हाल को वर्ष मा अद्यावधिक गरियो। Transgenic प्रविधि यसको विरोधीहरूले र रक्षक छ, तर स्थिति स्पष्ट समय बन्न गर्दैन। यस लेखमा हामी आफ्नो फाइदा र बेफाइदा, transgenic बिरुवाहरु को उदाहरण प्रस्तुत गरिनेछ के मा, आनुवंशिक बाली परिमार्जन छ के केन्द्रित हुनेछ।
समस्या को जोडतोडले
2016 को सुरुमा ग्रह पृथ्वीको जनसंख्या 7.3 अर्ब मानिसहरूलाई राशि र तेजी आज बढ्दै छ। ग्रह मा धेरै राष्ट्रका खाना र पानी स्थिर अभाव महसुस गर्छन्। यो समाप्त माटो प्रजनन परिणाम जो हानिकारक मानिसको प्रकृति मा प्रभाव, कारण छ।
को XX शताब्दीमा यो ग्रह मा फल-बोकेका क्षेत्रहरु को% छैन कम 20 भन्दा हराएको थियो। आफ्नो क्षेत्र र जैविक क्षरण, desertification, उपयोगी सतह को निस्तब्धता, अन्य उद्देश्यका लागि भूमि को जफती को फलस्वरूप कम गर्न जारी छ।
मेथानोल को उत्पादन को लागि औद्योगिक बाली को खेती गर्न संक्रमण जो अगाडी मानव पोषण को स्थिति झनै चर्काउने विकास भूमि को क्षेत्र, एक कमी गर्न जान्छ।
स्वास्थ्य अध्ययन को रूसी मंत्रालय खाना को जनसंख्या biologically बहुमूल्य उत्पादनहरु को मात्रा मा एक कमी द्वारा विशेषता छ देखाएका छन्। परिणाम, उत्पादन प्रोटिन, भिटामिन र अन्य प्राकृतिक तत्व को कमी छ।
वैज्ञानिकहरूले 9-11 अर्ब 2050 द्वारा गर्न धरती मा मानवता को समुदाय को संख्या मा वृद्धि भविष्यवाणी, त्यसैले तपाईं दोहोरो गर्न वा संसारभरि कृषि उत्पादनहरु को मात्रा तीन आवश्यक छ। यो वृद्धि गर्न सम्भाव्य transgenic बिरुवाहरु को परिचय बाली को मात्रा वृद्धि, साथै परम्परागत प्रविधिले हुर्किसकेका बिरुवाहरु नभएका गुण युक्त रूपमा मदत र उत्पादनहरूको मूल्य कम गर्न बिना छ।
कुनै पनि जीवित जीव यसका सबै सुविधाहरू निर्धारण कि जीन छ। परिष्कृत श्रृंखला जीन गुण गठन गर्दै हुनुहुन्छ। माला नै भएको जीनोटाइप (जीनोम) भनिन्छ।
पहिले, नयाँ संकर किसिमहरु प्रत्येक अन्य संग जीन परिवर्तन र नयाँ सुविधाहरू प्राप्त अभिभावकको बिरुवाहरु को संयोजन गरेर प्राप्त। यो प्रक्रिया लिए को एक महान रकम समय र अन्त उत्पादन अप आशा गर्न सधैं छैन।
नयाँ प्रविधिहरू विकास मार्फत यो आवश्यक जीन शुरू द्वारा छिटो संयंत्र जीनोटाइप परिवर्तन गर्न सम्भव थियो। यस दिशा अनुसन्धान गतिविधि आनुवंशिक ईन्जिनियरिङ् भनिन्छ गरिएको छ। बदलिएका जीन संग बिरुवाहरु transgenic भनिन्छ वा आनुवंशिक परिमार्जन गरियो। आनुवंशिक ईन्जिनियरहरु नयाँ जीनोटाइप सिर्जना गर्नुहोस्। त्यसैले चाँडै नयाँ बिरुवाहरु प्राप्त गर्न असमर्थ। विशिष्ट उद्देश्य संग एक जीनोटाइप परिवर्तन गर्ने मौका छ।
उदाहरण जीन परिमार्जनहरू
आनुवंशिक ईन्जिनियरिङ् जीन विभिन्न हानिकारक कारक प्रतिरोधी हो कि परिचय मद्दत गर्छ:
जीन नाइट्रोजन फिक्सिंग को परिपक्वता अवधि वृद्धि रूपमा प्रस्तुत गरे। प्रोटिन बिरुवाहरु को एमिनो एसिड संरचना सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
कृषि उद्योग र ठूलो क्षेत्रमा नै बाली रोपण को विकास किरा र रोग स्थानान्तरण को प्रजनन गर्न जान्छ। तिनीहरूलाई लड्न वैज्ञानिकहरूले धेरै रासायनिक यौगिकहरु सिर्जना गर्नुहोस्। किरा बिस्तारै बिष गर्न अनुकूल र प्रतिरोधी हुन्छन्। पर्यावरण यस अवस्थाको मा खस्कँदो छ: चाहेको कीराहरू मर्ने र माटो मा हानिकारक रसायन गिरावट।
आनुवंशिक ईन्जिनियरिङ् जीन किरा विरुद्ध सुरक्षा उत्पादन कि सृष्टिको प्रदान गर्दछ। टमाटर मा तीव्र क्षय कारण जीन फसल। को खीरे जीन चीनी को गठन को लागि जिम्मेवार थपिएका छन्, तपाईं एक मिठाई ककडी संग अन्त। सिद्धांततः जो उच्च पैदावार दिन र परजीवी डराउँछन् र बिरामी बन्न छैन यी विधिहरू बिरुवाहरु सिद्ध बढ्न अनुमति।
यो अभ्यास 1984 देखि बाहिर छ। पहिलो transgenic बोट 1983 मा दर्ता भएको थियो। यो सेल संरचना तेस्रो-पक्ष जीन शुरू जो मा, सुर्ती थियो। सुर्ती क्षेत्र परीक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका मा 1986 मा बाहिर थिए। र 1994 मा संयुक्त राज्य अमेरिका बिक्री transgenic खाना गयो। यी एक कम पकने अवधि र भटमास संग टमाटर थिए। मकै, टमाटर, आलु, भटमास, rapeseed, मुला, स्क्वास, र कपास: बजार मा दुई वर्ष पछि अनुवांशिक ईन्जिनियर बाली सूची आए।
त्यतिबेलादेखि जीन परिमार्जनहरू सबै बाली, तिनीहरूले बढन बाली लागू। यो आर्थिक लाभ कारण हो। सबै पछि, कोलोराडो कीरा किन डलर अरबौं गुमाए छन् जो छ, आलु को विशाल बाली नष्ट। transgenic आलु, कोलोराडो आलु कीरा विषय छैन पक्षमा निर्णय। तपाईं transgenic बिरुवाहरु उदाहरणहरू छन् कल गर्न सक्नुहुन्छ। मिति, सूची एकदम व्यापक छ। लगभग सबै बाली आफ्नो आनुवंशिक जुम्ल्याहा प्राप्त गरेका छौं।
transgenic बिरुवाहरु सिर्जना एकीकरण लागि बोट कक्षहरू विशिष्ट जीन को आफ्नो क्रोमोजोममा मा परिचय साथ सुरु हुन्छ। protoplasts को उपस्थिति तिर जान्छ pectinase वा cellulase,: यदि पहिलो सेल पर्खालहरु द्वारा इन्जाइमहरु हटाइएका छन् सरलीकृत विदेशी जीन शुरू को प्रक्रिया। को protoplast संरचना, कक्षहरू पोषक तत्व अवस्थामा cultured छन् जो पछि मा नयाँ जीन परिचय, त्यसपछि कक्षहरू बिरुवाहरु को रिकभरी लागि प्रयोग गरिन्छ गठन।
आनुवंशिक विज्ञान को मुख्य उद्देश्य - herbicides र भाइरस गर्न प्रतिरोधी transgenic बिरुवाहरु। यो उद्देश्य जो भाइरल प्रोटिन विरुद्ध कक्षहरू भित्र एंटीबडी व्यक्त transgenes शुरू को विधि लागि। संस्कृतिका Excretion बोट भाइरल रोग धेरै प्रकारका देखि बिरुवाहरु को एक विश्वसनीय सुरक्षा सिर्जना गर्न भाइरस उजागर छैन, सम्भव।
transgenic बिरुवाहरु उत्पादन आधारभूत विधिहरू छन्:
Agrobacterium को प्रयोग। यो बोट जीनोटाइप एक विशेष जीवाणुहरु परिचय छ।
"डीएनए-बन्दूक।" यस मामला मा, वैज्ञानिकहरु शाब्दिक कक्ष मा यसको डीएनए को "गोली"। फलस्वरूप, यी "गोलीले" इच्छित स्थानमा आफ्नो डीएनए निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ।
एक सकारात्मक मूल्य
चयन असम्भव भिटामिन को एक ठूलो राशि संग एक बिरूवा प्राप्त गर्न गरे। जैव रसायन को विकास मौका प्रदान। उदाहरणका लागि, यो भिटामिन पाँच पटक रकम वृद्धि जो ई एक उच्च भिटामिन ए प्राप्त स्ट्रबेरी को भिटामिन सी उत्पादित भटमास, एक उच्च सामग्री सन्तुष्ट संग "सुनको चामल" राखिएको थियो
प्रयोग बिरुवाहरु विभिन्न बहुमूल्य प्रोटीन, सुइहरु, एंटीबडी उत्पादन। प्रयोग बोट प्रणाली वाणिज्य मात्रा मा पुनःसंयोजक प्रोटीन छन्। 1986 मा पहिलो प्राप्त भएको थियो मानव विकास हर्मोन। तब देखि, जो हुन् संश्लेषित प्रोटीन, धेरै:
avidin (आणविक जीव अनुसन्धान प्रयोग);
छेना (दूध एक खाना थपिएको रूपमा प्रयोग प्रोटिन);
कोलेजन र elastin (चिकित्सा लागि प्रोटीन)।
आनुवंशिक परिमार्जन बोट जीव को प्रयोग शुद्धीकरण मध्यम आसपास मुद्दाहरू सम्बोधन। उदाहरणका लागि, एक बोट-biodegradatory सिर्जना गर्नुहोस्। तिनीहरूले ठूलो क्षेत्रमा तेल र अन्य खतरनाक पदार्थ को अपघटन मद्दत गर्न सक्छ।
पानी र माटो सफा गर्न, बोट वातावरण, विशेष गरी भारी धातु बाट हानिकारक पदार्थ अवशोषित गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी प्रयोग मा, नेतृत्व सुर्ती, यी सबै क्षमताहरु छ।
शुद्धीकरण बिरुवाहरु को कार्यहरू दूषित क्षेत्रमा त हटाइएको र नयाँ "क्लीनर" पार्टीसँग inoculated रोपिन्छ गर्न। पानी शुद्ध गर्न, यस्तो बोट सिस्टम जलीय समाधान मा जोडतोडले उखेल्ने गर्नुपर्छ।
transgenic बिरुवाहरु उत्पादन प्रक्रिया धेरै घटक समावेश:
उत्पादकत्व को एक उच्च स्तर संग प्रजातिहरू।
प्रति वर्ष धेरै harvests उत्पादन सक्षम एक संस्कृति सिर्जना। (उदाहरणका लागि, नस्ल स्ट्रबेरी, एक गर्मी मा दुई पटक fruiting।)
कीराहरू गर्न प्रतिरोधी transgenic बिरुवाहरु को उत्पादन। (एक आलु, आलु कीरा नष्ट हुन्छ।)
विविधता, कुनै पनि मौसम अवस्था हटाउन।
प्रजनन बिरुवाहरु पशु प्रोटिन उत्पादन। (चीन मा, सुर्ती cultivar मानव lactoferrin उत्पादन उत्पन्न।)
अनिकाल, कृषिशास्रीय कठिनाइ औषध विकास र धेरै अन्य: transgenic बिरुवाहरु को प्रयोग मुद्दाहरू, तिनीहरूलाई बीच एक नम्बर समाधान गर्न मदत। कारण आनुवंशिक परिमार्जन बिरुवाहरु गर्न वातावरण मा एक हानिकारक प्रभाव छ भनेर हानिकारक कीटनाशक गायब छन्। कीराहरू गर्न प्रतिरोधी Transgenic बिरुवाहरु, - यो कल्पना, तर कृषि क्षेत्र मा एक धेरै वास्तविक घटना हो।
आनुवंशिक परिमार्जन र प्राकृतिक बिरुवाहरु बीच मतभेद
प्राकृतिक र transgenic बिरुवाहरु बीच भेद सरल layman सम्भव छैन। यो प्रयोगशाला परीक्षण गरेर बाहिर पाइन्छ।
2002 मा स्वास्थ्य रूसी मंत्रालय पाँच भन्दा बढी प्रतिशत gennopreobrazovannogo सामाग्री बनेको छन् उत्पादनहरु लेबल गर्न निर्माताहरु आदेश दिए। तर वास्तविकता मा, जस्तै लेबलिंग लगभग कुनै एक कल छ। उपयुक्त जाँच नियमित जस्तै उल्लंघन प्रकट गर्छ।
आयात, आनुवंशिक परिमार्जन उत्पादनहरु को अधिग्रहण र बिक्री को लागि योग्य हुन त्यहाँ एउटा राज्य दर्ता प्रक्रिया chargeable छ। यो खाद्य निर्माताहरु लागि अति disadvantageous छ।
एक उत्पादन लगाइँदै खाना मानिसहरूलाई हानि हुनेछ होइन। यसैबीच, धेरै खरीदारों यो एक खतरा संकेत रूपमा बुझ्ने।
आनुवंशिक परिमार्जन बिरुवाहरु - तिनीहरूले के हुन्?
रूस मा, transgenic बिरुवाहरु को सबै 10 प्रकार दर्ता गरिएको छ र आवश्यक जाँच। यी समावेश:
भटमास दुई प्रकार;
मकै पाँच प्रजाति;
दुई आलु प्रजातिहरू;
यसबाट चिनी चुकंदर।
पश्चिमी, आनुवंशिक परिमार्जन उत्पादनहरु तिनीहरूले समतल littered, लेबल छ। रूस मा, धेरै समान उत्पादन, हुनत उपयुक्त तिनीहरूलाई त्यहाँ चिह्नों। तर, यी सबै उत्पादनहरु अन्य देशका आयात छन्। रूस मा मात्र वैज्ञानिक प्रयोग मा त सम्म आनुवंशिक परिवर्तन संस्कृति फेला परेन। वैज्ञानिकहरु साँचो गर्व आलु पात beetles मर्न जो आलु छ।
Environmentalists यस्तो आलु विरोध गर्छन्। जो रगत सूत्र को चूहहरुमा परिवर्तन मा एक आलु खाने गरेर, शरीर गरेको अंगहरु को अनुपात, त्यहाँ विभिन्न pathologies हुन् भनेर देखाए अनुसन्धान। तथापि, वैज्ञानिकहरूले अनुसार, यो एक पुरा को रूप उद्योग अस्वीकार गर्न एउटा कारण छ।
Transgenic विकास धेरै प्रजनन विधिहरू सजिलो, र कहिले काँही सुरक्षित। Transgenic उत्पादनहरु त्यसैले, अल्पविकसित देशहरुमा मांग गर्दै छन्, प्राकृतिक धेरै सस्ता छन्। भविष्यमा, जैविक तरकारी र मासु उच्च मूल्यहरु संग सानो पसलहरूमा को उत्पादन हुनेछ।
लाभ र आनुवंशिक परिमार्जन बिरुवाहरु को बेफाइदा
त्यहाँ transgenic प्रविधिको महत्त्वबारे दुई विरोध दृश्य हो। केही वैज्ञानिकहरूले genotypic डाटा को परिवर्तन पूर्ण मानव शरीर लागि सुरक्षित विश्वास र कृषि विकास लागि धेरै उपयोगी छ। अरूलाई जस्तै रूपान्तरणहरू को परिणाम मात्र धेरै वर्ष पछि आफूलाई देखाउने भन्ने विश्वास गर्छन्।
transgenic बिरुवाहरु को आगमन पनि आधा विश्वको विभाजित। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना र धेरै अरु - पछि ती बीचमा। यो कृषि को एक पछाडि प्रणाली संग युरोप र धेरै देशहरूमा विरुद्ध कार्य।
transgenic बिरुवाहरु विरुद्ध तर्क यस्तो संस्कृति अन्ततः आफूलाई ineradicable तान्नु बन्न वा वातावरण प्रदूषण, अन्य वृक्षारोपण जोडिएको भन्ने विश्वास छ। निस्सन्देह, यो एकदम सम्भव छ।
संसारमा र रूस मा स्थिति
आनुवंशिक परिमार्जन उत्पादनहरु मा युरोपेली समतल धेरै दुर्लभ छन्। राज्य अधिकारीहरूले लेबल यस्तो उत्पादनहरु आवश्यकता सख्त व्यवस्था लिइरहेका छन्। त्यहाँ डीएनए नियम पनि हो। युरोप को यो स्थिति एक राजनीतिक र आर्थिक प्रकृति छ।
यस्तो व्यवस्था अझै रूस मा। तर, त्यो gennoizmenennye संस्कृति राख्न अनुमति कुनै कानून हो। gennopreobrazovannye उत्पादनहरु विदेशी देशका आयात गर्न अनुमति रूपमा, नयाँ प्रजातिहरू को उत्पादन को विकास सक्छ साथै। रूस मा transgenic भटमास र मकै आयात।
माल gennoizmenennymi फारम मिडिया प्रतिनिधिहरु को स्थिति सार्वजनिक राय। तिनीहरूले भ्रष्टाचार फुल्नु र शत्रुहरू gennopreobrazovannoy उत्पादनहरु छेउमा लिन। एकै समयमा यसको सुरक्षा को वैज्ञानिक प्रमाण को छाया मा बाँकी छन्।
चासो लागि त्यहाँ कारण छ?
आनुवंशिक परिवर्तन गर्न susceptible कुनै पनि बिरुवाहरु, ठूलो आवेदन गर्न अनुमति प्राप्त गर्नुअघि पारित अनिवार्य सुरक्षा जाँच। सरकार एजेन्सीहरू यी बाली को खेती सँग सम्बन्धित पर्यावरण र toxicological जोखिम अन्वेषण छन्। आनुवंशिक परिमार्जन उत्पादनहरु को प्रयोग पछि कुनै गम्भीर हानिकारक प्रभाव अझै दर्ता गरिएको छैन गरिएका।
आनुवंशिक इन्जिनियरिङ एक एकदम उज्ज्वल संभावनाहरु प्रदान गर्दछ: transgenic बिरुवाहरु बिरामी बन्न छैन र Rot छैन। तर पुरानो भनाइ भूल छैन: "। प्रकृति एक निर्वात घृणा गर्नुहुन्छ" जहाँ किरा र रोगहरु जाने? परजीवी खाना र मर बिना रहनेछ हुनुहुन्छ? के प्रभाव यस घटना अझै अस्पष्ट छ।
transgenic प्रविधि, ईन्जिनियरहरु को विरोधीहरूले अनुसार, geneticists प्रकृति विरुद्ध हिंसा प्रतिबद्ध। तिनीहरूले विपरीत प्रजनकों दुःखी नतिजा गर्न अनिवार्य नेतृत्व गर्नेछन् जो कुनै पनि निर्देशन, कुनै पनि जीन सार्न। तर, समय, र सर्जन मानव शरीर र आधुनिक चिकित्सा बनाएको छ ठूलो प्रगति र चिकित्सकको कार्यहरू, विवाद कुनै एक कारण हस्तक्षेप गर्न साहसी आरोप थियो।
यो सक्छन् रूपमा, प्रगति रोक्न सकिँदैन। शायद, transgenic बिरुवाहरु को प्रयोग - कृषि उद्योग को निकट भविष्यमा छ। यसबाहेक, धेरै गाह्रो परिस्थिति बाहिर प्राप्त गर्न कृषि मदत गर्न सक्छ आनुवंशिक ईन्जिनियरिङ् को विकास। नयाँ जैव निर्णय र अन्य मुद्दाहरू (खाना, प्राविधिक र राजनीतिक) प्रदान गर्नेछ।
अब यो स्पष्ट हुन्छ यस्तो transgenic बिरुवाहरु (GMPs) भनेर उदाहरण र यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्छन् लेखको कुनै पनि पाठक।
अमोनिया। रासायनिक गुण, भौतिक गुण। लागू र प्राप्त
व्यावहारिक भौतिकशास्त्र: photoemission
अवधारणा - प्रमुख वैज्ञानिक अनुसन्धान
मनोविज्ञान मा जीवनी विधि
मशरूम र पनीर पाइ: रोचक व्यञ्जनहरु
अशुद्ध छाला - यो के हो? नयाँ सामाग्री बारे सम्पूर्ण सत्य
बारेमा भनेर Daedalus र Icarus को मिथक बताउँछ
होटल Avra ​​बजेट बीच होटल 1 * (कोर्फू, ग्रीस): विवरण, फोटो, पर्यटकहरु को समीक्षा
Bulgars (RT): देखेर लायक छन् कि ठाँउहरु!
Zinnias। रोपण र हेरविचार
रंग शैम्पू - बाल रंग मा एक अहानिकारक परिवर्तन
परमवीर चक्र के हो र मानव शरीर यसको प्रभाव के छ
किन आफ्नो आँखा चोट: कारणहरू र रोग को उपचार
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध को सिद्धान्त
अर्थ "ब्वाँसो" टाटु के हो?